တရုတ် ကျေးဇူး ကြီး မား ၍ ကျေးဇူး ပြန် ဆပ် သင့် ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ပြော | The FNG
တရုတ် ကျေးဇူး ကြီး မား ၍ ကျေးဇူး ပြန် ဆပ် သင့် ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ပြော
November 24, 2012 · by 21 South News	· in News.	·
မုံရွာ ခရိုင် ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် အတွင်း က လက်ပံတန်းတောင် ကြေးနီ စီမံ ကိန်း ကို ဦးစီး
လုပ်ဆောင် နေ တဲ့ တရုတ် ၀ှမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီ နဲ့ဦးပိုင် ရဲ့လုပ်ငန်း တွေ ကို ရပ် တန့် ဖို့ဆန္ဒပြ နေ
တဲ့ ဒေသခံ တွေ ၊ အလုပ်သမား ၊ ကျောင်းသား ၊ သံဃာ တော် တွေ ရဲ့သပိတ် စခန်း ကို ရောက်
ရှိ လာ တဲ့ ဦးအောင်မင်း က ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် တွေ ကို ပြောကြား ရာ မှာ ” တရုတ် က မူဆယ်
ဘက်က နေ ပစ္စည်းတွေ သွင်း ပေး ပြီး ထမင်း ကျွေးထား ကြောင်း ၊ တရုတ် ကျေးဇူး ကြီး မား
ကြောင်း ၊ တရုတ် နိုင်ငံ ရဲ့ကျေးဇူး ကို ကာ ပြန် ရင် အ၀ီစိ ငရဲ မှာ နောက် ဘုရား မပွင့် မချင်း
နေရ မှာ ဖြစ် တယ် ” လို့ပြောကြား ခဲ့ တယ် လို့ဦးအောင်မင်း နဲ့ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် တွေ တွေ့ 
ဆုံ ပွဲ ကို တက်ရောက် ခဲ့ တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်း စောင့် ရှောက် မှု ရေး ရာ တက်
ကြွ လှုပ်ရှား သူ ကို ကျော်ဦးထွန်း က FNG ကို ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း နဲ့ဦးလှမောင် ရွှေ တို့ရောက် ရှိ လာ ပြီး ဆန္ဒပြ သူ တွေ ကို
ညှို နိုင်း ခဲ့ ကြောင်း သပိတ် စခန်း ရဲ့သဘောထား ကို ယူ ပြီး အထက် ကို တင် ပြ ပေး မှာ သည်းခံ
စိတ် ရှည် ကြ ဖို့နဲ့ပုတီးစိပ် ၊ တရား ထိုင် ဖို့လည်း သူ က ထပ်လောင်း ပြော ခဲ့ တယ် လို့ဝှက်မှေး
ကျေး ရွာ သူ တစ်ဦးက FNG ကို ပြောပါတယ်။
၀က်မှေး ကျေး ရွာ သူ မသွဲ့သွဲ့ ဝင်း က တော့ တရုတ် ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့သယံဇာ တ တွေ ကို ကုပ်
သွေး စုပ် နေ ကြောင်း ၊ ပြည်သူ တွေ လုံးဝ မခံ စား ရ ဘဲ တရုတ် အစိုးရ ၊ ခရို နီ တွေ နဲ့မြန်မာ အာ
ဏာ ပိုင် တွေ သာ ခံ စား နေရ လို့လုံး ၀ ကျေးဇူး မဆပ် နိုင် ကြောင်း ပြန်လည် ပြော ခဲ့ ပါတယ်။
လက် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး တောင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စကို ကွင်းဆင်း
စစ်ဆေးပေးဖို့ ကို လည်း ဒီနေ့လွှတ်တော် မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်အမတ်တဦး
က တင် သွင်း ခဲ့ တာ ကို ထောက်ခံ အတည် ပြု ခဲ့ ပါတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ် ဆိုင်း ဖို့အတွက် ပြော နေ ကြ ပေမယ့် အဲဒီ ဒေသ မှာ
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ် ထား တာ ကြောင့် ရပ်ဆိုင်း ဖို့ဆက် အရေး ဆို နိုင် ရင် အန္တရာယ် ရှိ နိုင်တယ် လို့ 
သူ က သတိ ပေး ခြိမ်းခြောက် တဲ့ ပုံ စံ နဲ့လည်း ပြော ဆို ခဲ့ တယ် လို့ဆိုကြ ပါတယ်။
ဆားလင်းကြီး ဒေသ က ပြည်သူ တွေ ရဲ့အခွင့် အရေး နဲ့သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်း ရေး ကို
ပူးပေါင်း တဲ့ အနေ နဲ့ရန်ကုန် မန္တလေး နဲ့အခြား မြို့ကြီး ၁၈ မြို့လောက် မှာ လက်ပန်းတောင်
တောင် တရုတ် ကြေးနီ စီမံ ကိန်း ရပ် တန့်ရေး ဆန္ဒ ထုတ် ဖော် ပွဲ ကို နိုဝင် ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ မှာ
ကျင်း ပ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Feature Photo : Kuni Takahashi ( New York Times)
← အကျင့်ပျက်ချ စား မှု ဖော်ထုတ်သည့် PDP ပါတီ ခေါင်းဆောင် များ ထောင်ချ ခံရ
ဦးပိုင် ရဲ့လိင် အရှုပ်တော် ပုံ →
19 responses to “တရုတ် ကျေးဇူး ကြီး မား ၍ ကျေးဇူး ပြန် ဆပ် သင့် ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ပြော”
မောင်မောင်လေး December 16, 2012 at 6:22 pm · ·
ကျေးဇူးဆပ် ရမယ်ဆိုတဲ့ စကား တခွန်းအတွက် မြန်မာပြည်သူ အားလုံး ( အောင်မင်း) ကိုဆဒ ပြ ကြမယ်။
အောင်မင်း သေသင့် တယ်။ လက်ဖြောင့်ငှါးပြီး ရှင်း ပစ် သင့်တယ်။နယ်စပ် သွားရင် ပစ်သတ်ခံရမယ်နော်။
Phyumyintmyat November 30, 2012 at 7:22 am · ·
daewoo November 29, 2012 at 9:05 pm · ·
တရုတ်က မင်းအမေကို ကြားကားဆွဲသွားလို့လား…အဲလောက် အဖေ့ကိုချစ်နေရင်တရုတ်ပြည်မှာ သွားနေပါလား……
kokonaw November 29, 2012 at 6:16 pm · ·
တော်တော်ရူးတဲ့  အဖိုးကြီးဘဲ
maung November 29, 2012 at 4:31 pm · ·
tun lim November 26, 2012 at 9:22 pm · ·
တရုတ်နဲ့မင်း သမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ပါလား မကျေနပ်သေးရင်ခင်ဗျးာပါခံလိုက် အောင်မင်း ပြုတ်ချင်နေပြီလား ထမင်းကျွေးထားတဲ့ပြည်သူကိုဖင်လှန်ပြတဲ့ကောင် ခွေးထက်မိုက်တဲ့ကောင်
ဝမ်ကျားပေါင် November 26, 2012 at 7:20 pm · ·
မင်းတို့အားလုံးမှားတယ် အောင်မင်းမှန်တယ် ……. ဆက်လုပ်ထားလူကလေး အောင်မင်း ဒို့ဝပ်ပေါင်နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာရင်မင်းကိုအဲဒီဒေသရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးပေးမယ်
eric chow November 26, 2012 at 1:00 pm · ·
သောက်ရမ်း ကျေးဇူးကြီးတယ်။ ကိုယ့်ဆီက အဘိုးတန်တဲ့ အရာတွေကို ၂ပဲ ၆ပြားပေးပြီး သယ်ထုတ်နေတာ ဘယ်လောက်တောင်နစ်နာ ခဲ့သလဲ ထည့်မပြောတော့ဘူးလား၊ တစ်ခွန်းလောက်တော့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
တရုတ် ကြွေးထား ပေးထားတာတွေ မကုန်သေးဘူးလား လို့။
ko lwin November 25, 2012 at 5:14 pm · ·
ကျေးဇူးဆပ်ချင်ရင် ခင်ဗျား အမျိုးတွေနဲ တရုပ်တွေ အလကားပေးစားပါလား
maung htun November 25, 2012 at 7:53 am · ·
please u aung min …
take note that you are china citizen or burmese citizen ?
now are you work for china or burma (Myanmar)?
previous genta state also you are includedamember?
why you said ” nobody want these duty ” i ope alot of people can be done it …if you can’t do and easy to suggest for only resignation from present duty .Please do not waste time and people taxation again and again.
maung htun November 25, 2012 at 7:57 am · ·
We are support to monywa people included ma twe twe win who can teach U Aung Min more than words because their mind are still pray to China ….
We don’t want any china project in the country …
Why people are said thanks for china ?
ball November 25, 2012 at 3:53 am · ·
အောင်မင်းရေ မင်းပုထွေးတွေကို ဒီလောက်တောင် ကျေးဇူးဆပ်ချင်နေရင် ဖင်ပါကုံးပေးလိုက်ဟ
ko lwin November 25, 2012 at 5:10 pm · ·
snow November 25, 2012 at 12:21 am · ·
Ko Latt November 30, 2012 at 11:35 pm · ·
မသိဘူးကွ။ ရှိခိုးမယ့်နေ့ပြောပါအုံး။ ငါတို့ တွေ ကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်အောင် ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင် ပေးမယ်။ ဆုပေးမယ်။ ဘုန်းကြီးပါစေ သက်ရှည်ပါစေ။ အကုသိုလ်ဝေး ကုသိုလ် ပွားမြားနိုင်စေ လို့။
Nay Kha November 24, 2012 at 7:20 pm · ·
သေလိုက်ပါတော့မောင်အောင်မင်းရယ်….ခင်ဗျားကြီးအဲ့လောက်သိတက်ရင် ပြည်သူတွေအပေါ်မှာဘာသိတက်လဲ? အဲ့ဒါအသာထားပါအုံး ခင်ဗျားကြီးရဲ့ မိဘအပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးဇူးကိုအရင်ဆပ်ပါအုံး…ခင်ဗျားကြီးသာ ပြည်သူတွေဆီကရတဲ့နိုင်ငံ့လစာနဲ့ တရုတ်ကလဒ်ထိုးထားတာကြီးတွေ စားထားပြီးတော့…ပြည်သူဆိုတာ ကို့ထမင်းကိုရှာစားတာကွဲ့ ကို့ဟာကိုပဲနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုအရင်ကျေးဇူးဆပ်အုံး အဲ့လောက်မှမသိလဲ နိုင်ငံ့ဝန်ကြီးလုပ်မနေနဲ့ အလှုခံတွေမှာရှေ့ကနေစည်တော်ကြီးတီးတဲ့ ဇတ်ထဲကအ၀တ်ဝတ်ပြီးဝန်ကြီးပဲ လုပ်လိုက်တော့ အဲ့တာတောင်တော်တော်လွန်နေပြီ…
UKMOE November 24, 2012 at 12:13 pm · ·
myo November 24, 2012 at 10:13 am · ·
ကျေးဇူးဆပ်ရမှာကမင်းဒို / ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူး
H.Naing November 24, 2012 at 7:55 am · ·
တရုတ် ကျေးဇူး ကြီး မား
ကြောင်း ပြော သူ ၇ဲ့အမျိုးတွေနှင့် သူအမျိုးသမီး၊မိသားစုကို တရုတ် မှာသွား ကျေးဇူး ဆပ်ခိုင်း၇မှာ။ ။